Haala Yeroo Irratti Ibsa Gabaabaa Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Irraa Kenname |
Home Afaan Oromoo Haala Yeroo Irratti Ibsa Gabaabaa Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Irraa Kenname
Haala Yeroo Irratti Ibsa Gabaabaa Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Irraa Kenname.
Duula Nu Irratti Karoorfame Ofirraa Ittisuu fi Ummata Keenya Badii Diinni Karoorse Irraa Qolachuuf Tarkaanfii Of Ittisuu Kan Fudhannu Ta’uu Hubachiifna.
Addi Bilisummaa Oromoo ABOn Marii Mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti jalqabame milkeessuuf jecha Adoolessa 12/2018 irraa eegaluun Waraanni Bilisummaa Oromoo WBOn gama isaatiin dhukaasa dhaabuu murteessee labsii dhukaasa dhaabuu labsuun keenya ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa jijjiirama qabsoo bilisummaa Oromoon dhufe ni fudhanna jijjiirama kanas hojiitti hiikna jechuun gartuun mootummaa sochiitti jiran kan MM Dr Abiy Ahmedi fi Obboo Lammaa Magarsaan durfaman haa socho’aniyyuu malee gama mootummaatiin waraanni EPRDF karaa kallattii ta’eefi alkallattii ta’een dhukaasee uummata Oromoo ajjeesuu hin dhaabne. Uummata Oromoo irratti yakki waraanaa itti fufinsaan karaa lama gaggeeffama jira.
Lola daangarraa kan daangaalee Oromiyaa Bahaa Harargee, Kibba Oromiyaa Boorana (Moyyaalee) Gujii hanga Baaleetti maqaa humna addaa Somaalee meeshaa waraanaa ammayyaa hidhachiifamaniin uummanni keenyi qe’ee isaatti ajjeefamaafi qabeenya isaa irraa jumlaan buqqifama jira.Haaluma walfakkaatuun hidhattoota Gumuuziin Lixa Oromiyaa Wallaggaa bahaafi Kaaba Oromiyaa Wallootti hidhattoota Affarin yakki waraanaa uummata keenyarratti gaggeeffama jira.
Waraanni EPRDF, TPLFn ijaarame gannota 27 guutuu uummata Oromoo fixaa kan tureefi har’a illee Waraanni kun hooggansa EPRDF MM Dr Abyi Ahmedin yeroo durfamaa jirutti illee itti fufinsaan guyyaa saafaa dhukaasee uummata Oromoo nagaa qe’ee isaatti ajjeesuu irraa hin dhaabbatne.Torban dabarsine kana keessa Godina Booranaa Moyyaaleetti uummata Oromoo Waraanni Ittisa biyyaa EPRDF dhukaasa irratti banee lubbuu namoota hedduutu wareegame; dhibbootaan madeeffaman, Lixa Oromiyaatti fanjii awwaaluun WBO irratti ittin olola oofuuf lubbuu ilmaan Oromoo namoota 10 galaafatee hedduun madeeffamaniru. Kana malees lola humnoota ollaa hidhachiifamani uummata Oromoo irratti waraana gaggeessa jiran mootummaan EPRDF fi ajajjootni waraanaa EPRDF harka keessa qabu. Haalotni harka keessa qabachuu isaani argisiisan yeroo haleellaan uummata keenyarratti gaggeeffamu qooda irraa ittisuu beekaa callisaa jiraachuufi sana irraa iyyuu darbee waraanni humni ittisa biyya (makalakiyaan) ofii isaatiis dhukaasa banee uummata nagaa qe’ee isaatti ajjeessa jiraachuun olitti ragaan hin jiru.
Waraanni Wayyaanee EPRDFn durfamu labsa waraanaa dheengadda baaseen tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhanna jechuun WBO, Qabsaa’ota Bilisummaa Oromoofi Waliigalatti uummata Oromootti dhaadate jira. Yeroo ammas kutaalee Oromiyaa gara Dhihaa, Gidduugaleessaafi Oromiyaa bakkoota heddduutti mootummaan Waraana bobbaasuun uummata keenya shororkeessa waan jiruuf adamoofi yakkaa waraanaa nurratti aggaamamuu kamiyyuu of irraa qolachuufi ofirraa kan ittifnu ta’uu ni hubachiifna. Kanuma waliin WBOn gama isaatiin tarkaanfii of ittisuu irratti xiyyeeffannoo adda kan kennu ta’uu hubachiifna!!
Oromoon Kaabatti; Kibbatti, Bahaa fi Dhihaan yeroo irratti duulamaa bahe WBOn Ummata isaa ittisuuf wareegamaa qaalii yeroo irraa gara yerootti kaffalaa asga’e. Har’a fallaa isaa Waraanni EPRDF aangoo ofii tiksuuf jecha WBO irratti duuluun furmaata ta’uu hin danda’u. Waraanni EPRDF labasa baasuu kun ummata keenya daangaa irraa diinaan weerarama jiru ittisuu diduu qofa osoo hin taane diinota waliin tahuun ummata keenya fixaa bahe; ammallee fixaa jira. Kanaaf duula yeroo amma waraanni EPRDF labsacha jiru kanaan balaa lubbuu fi qabeenya irra gahuuf Mootummaan EPRDF Kan itti gaafatamu tahuu gadi jabeessinee hubachiifna!!
Waraanni ERDF ,TPLFn ijaarameefi leenjifamee waggaa 27 guutuu uummata Oromoo fixaa ture kun yakkamaadha. Har’a yeroo Ilmaan Oromoo sirna EPRDF keessa jiran MM Dr Abiy Ahmedin durfamus itti fufinsaan uummata Oromoo ajjeesaa kan jiru Waraanni EPRDF uummata Oromoo bakka hin bu’u. Caasaan mootummaa haaromsaa jedhuufi jijjiirama Qabsoo Bilisummaa Oromoon dhufe ni deeggarra ni ceesifna jechaa jiru kan MM Dr Abiy Ahmedi fi Obboo Lammaa Magarsaan durfamu waraana EPRDF Oromiyaafi uummata Oromoo gooluuf dhaadatu kana uummatarraa gara Mooraa waraanaatti deebisuun leenjii haaromsaa gadi fageenyaan akka kennanif hubachiifna.
Labsiin waraanaa tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhanna jechuun ministerri waraana labsa waraanaa baasee mediaf social media irra facaase caasaan sirnicha jijjirama siyaasaa Qabsoofi wareegama uummata keenyaan dhufeef kabajaa kan hin qabneefi wareegama uummataatti bishaan naquu argisiisa. Ammas wareegama dabaluuf dhaadachuun dhumarratti sirnacha kufaatii irraa kan hin hambifne ta’uufi gufuu nagaafi jijjirama hawwamuu akka ta’ee hubachiifna.
Ilmaan Oromoo quuqama Oromummaa qabdan kan dhugaan eessa akka jirtu isiniif galee caasaa Poolisaa Federaalaa, Waraana Ittisa biyyaa EPRDF keessatti argamtan hidhannoo waraanaa isin harka jiruun Uummata keessan daangaa irratti diinaan haleelama jiru cina akka dhaabbattaniifi Oromiyaa dirree waraanaa gochuuf labsa waraanaa dhaadannoon guutame dheengadda ministerri ittisa biyyaa EPRDF baase faacaase irratti dammaquun dura akka dhaabbatta waamicha isiniif goona!
Ilmaan Oromoo dabballootni Mootummaa EPRDF fi ODP sadarkaa garaagaraa irratti argamtan WBOtu hiikkachuu diide jechuun olola bilchina siyaasaafi hiika hin qabne ofuu irra Waraanni EPRDF uummata Oromoo fixaa tureefi ammallee itti fufinsan yakka waraanaa rawwachaa jiru seeraatti akka dhiyaatuufi uummata gooluu irraa akka of adabu aangawoota keessan akka gaafatan isin hubachiifna!!.
Ummatni keenya Injifannoo wareegama qaalii baasuun asiin geenye tikfachuun gaalii keenya isa dhumaa Bilisummaafi Walabummaa keenya gonfachuuf tokkummaan akka nu waliin dhaabbatuu gadi jabeessinee waamicha keenya dabarsina. Addatti Qeerroon Bilisummaa Oromoo, qabsaa’otaafi deeggartoota qabsoo Bilisummaa Oromoo wareegama waliin baasaa turre tikfatuuf roorroo diinaa kallattii kamiin iyyuu nutti dhufu of irraa qolachuufi uummata keenya bilisummaa isaa gonfachiisuuf harka wal qabatne haa sochoonu!!
Previous articleMaking Progress on Ethiopia’s Reforms
Next articleSBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Mudde 21, 2018